आज हाम्रो छलफल भएको ग्रीनहाउस मा खीरे हेरचाह कसरी समर्पित हुनेछ। यस मामला मा, हामी दुवै बिरुवा लागि हेरविचार को नियम बारे बताउन र Greenhouses मा लागि बोट परिपक्व हुनेछ।
बिरुवा को हेरविचार
हामी ग्रीनहाउस मा खीरे हेरचाह गर्ने बारे कुरा अघि, हामी बिरुवा कुरा हुनेछ। आखिर, एक स्वस्थ र बलियो बिरुवा - यो चरण सिफारिस हजारी र तापमान मोड पालना गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ र एक समय तरिका मा बिरुवाहरु खुवाउन मा त, बाली राम्रो गर्न प्रमुख छ।
को गतिविधिहरु ख्याल ककडी बिरुवा को ग्रीनहाउस मा:
नियमित रूपमा छाडा माटो, यो नाजुक बोट, विशेष गरी मूल बिगार्न छैन (यो stagnate गर्दैन पानी सुनिश्चित गर्न गरिन्छ);
को ग्रीनहाउस बिहान सात बजे पछि हरेक दिन, तापमान मा अचानक परिवर्तन को wary हुन हवादार, साथै बाहिर रूपमा भित्र थर्मामीटर प्रयोग;
(पाँच दिनमा केवल एकपटक) बिरुवा सामान्य पानी हाले र केवल न्यानो पानी;
खनिज र जैविक मल (पर्याप्त बिरुवा स्थिर मा उतरने पछि एक पटक वा दुई पटक fertilized) संग बिरुवाहरु खाद।
वयस्क बोट हेरविचार लागि
संयंत्र एक वयस्क, जब पहिलो फूल मानिन्छ। यो चरण मा यो ठीक खीरे हेरचाह कसरी थाहा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। सामान्यतया, सबै हेरविचार गतिविधिहरु मुख्य रूप हजारी र रुचाउने समावेश, र यो weeding र Topping, जोताइ समावेश छ।
त्यसैले कसरी ग्रीनहाउस ककडी हेरचाह गर्न? यहाँ हामी तपाईंलाई साझेदारी गर्न केही चाल थाहा आवश्यक छ:
पहिले नै फल फलाउन गर्न सुरु गरिएको छ जो वयस्क बोट, यो पहिले नै फल दिइरहेका छन् जो yellowed पात र मार, हटाउन आवश्यक छ। तिनीहरूले हामीलाई आवश्यक छैन। तर हरिया पात छुन छैन - तिनीहरूले नयाँ फल गर्न पोषक प्रदान गर्नुहोस्।
न्यानो पानी बिरुवा, तर बोट वयस्क मात्र होइन पानी हाले गर्नुपर्छ। को ग्रीनहाउस मा यो एक हप्ता दुई वा तीन पटक गर्न पर्याप्त छ।
तरल जटिल मल लाउने संग align टीन। यो कम्तिमा एक पटक सबै आवश्यक तत्व को पूर्ण प्राप्त भएन आफ्नो ग्रीनहाउस खीरे जस्तै, एक हप्ता गर्छन्।
को बोट कमजोर छ भने, पात, त्यसपछि स्प्रे तल यूरिया देखि। पोषक को सबैभन्दा ठूलो प्रवेश त्यहाँ आउछ यो तल्लो भाग हो।
रोपण पछि पहिलो महिना मा, त्यसपछि बस बिभाजनमा वरिपरि पृथ्वीको पियर्स र ताजा जमीन छिडकना, माटो खुकुलो पार्नु।
को खीरे तीतो स्वाद छैन तपाईं तनाव (तापमान मा अचानक परिवर्तन, बाँणशैली आहार, सुक्खा माटो) तिनीहरूलाई सुरक्षित भने: को ग्रीनहाउस मा खीरे हेरचाह गर्ने बारे कुरा, यो एक चाल थाहा आवश्यक छ।
तपाईं gnarled फल वा नासपाती आकारको सङ्कलन गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि तरकारी पोटाश र नाइट्रोजन मल खाद - र त्यसपछि सुन्दर खीरे प्राप्त।
उपज मा एक कमी गर्न फल, पहेंलो र ठूलो नेतृत्व को एस्केलेशन अनुमति छैन। त्यसैले कम्तिमा खीरे हरेक अर्को दिन सङ्कलन, तर तपाईं प्रत्येक दिन सक्छन्।
अब तपाईं खीरे लागि हरितगृह मा हेर्न कसरी थाहा छ। हामी तिनीहरूलाई निम्न, तपाईं निश्चित रसदार र उपयोगी बोट एक धनी बाली प्राप्त हुनेछ यी सुझावहरू उपयोगी छन् भन्ने आशा र।
अन्डा प्रक्रिया पूर्व विभिन्न तरिकामा गर्मी चालू गर्न
कीडे कुखुरी: लक्षण, लक्षण र उपचार सुविधा
एक कैंडी पल्ट के हो, र यो कि proibretat?
केन्या समीक्षाएँ, फोटो। केन्या यात्रा
मेगाहर्ट्ज Tobolsk सडक: सेवाहरू
गलसुआशोथ को जटिलता: के, कसरी जोगिन
Anatoliy Bledny: कलाकार को एक जीवनी
कसरी Antonovka अम्बर देखि जाम तयार?
को "प्रतिज्ञा गरिएको भुक्तानी। Intersvyaz" कसरी सक्रिय
Artvin तल्ला - यो के हो? Artvin तल्ला: मूल्य समीक्षा
कसरी सिरका संग लुगा धुने मेसिन सफा गर्न? सफाई विकल्प विधिहरू
चरणमा एक "टाइटैनिक" कसरी आकर्षित गर्न